အကြောင်းအရာဖန်တီးမှုမော်ကွန်းတိုက် 37 ၏စာမျက်နှာ 37 | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » အကြောင်းအရာဖန်ဆင်းခြင်း (စာမျက်နှာ 37)
စတူဒီယိုစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုအားလုံးသည်ရှိသည်နှင့်အချို့သောအမျိုးအစားကဗီဒီယိုထုတ်လုပ်မှု Switcher ကိုအသုံးပြုပါ။ ခလုတ်နဲ့ switches ၏ပဒေသာနှင့်အတူကြီးမားတဲ့စားပွဲခုံ - အချို့သောလုံးဝဆော့ဖျဝဲ-generated ကွန်ပျူတာ screen ပေါ်မှာဖြစ်စေခြင်းငှါနေချိန်မှာသူတို့အသံသည်အတိုင်း, ရိုးရာ Switcher အများစုအတိအကျများမှာ! ငါဒါအခြေခံအသံမှကိုမုန်းပေမယ့်အခါသင်မြင်သောကြီးမားသော Switcher ...
ရဲ့ကရင်ဆိုင်ရပါစို့ - အသံလွှင့်အသံနှင့်အတူထွက်တော့တာပဲ။ "ဓါတ်ပုံတွေနှင့်အတူရေဒီယို" ရှိခဲ့သည် Long ကမတိုင်မီ (ပိုကောင်းသော "ရုပ်မြင်သံကြား" အဖြစ်ကိုအားလုံးသိ), ရိုးရှင်းစွာရေဒီယိုရှိ၏။ အဘယ်မှာ "အသံအင်ဂျင်နီယာများ" ၏ထွန်းသည်ထင်ရှား - ကအားလုံးကိုစတင်ခဲ့ပြီးရှိရာရေဒီယိုဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာသံကိုဖန်ဆင်းတော်မိုက်ခရိုဖုန်းအပြင်ဘက်ထုတ်လုပ်ကြောင်းသေချာစေရန်အသံအင်ဂျင်နီယာရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ခဲ့ပါတယ် ...
သူဟာ Emmy Lighting စွမ်းအင်သက်သာဆုရ
Time Warner Cable ကို SportsNet နဲ့ El Segundo, California မှာ Time Warner Cable ကိုပြည်နှင်ဒဏ် America မှာအများဆုံးစွမ်းအင်ထိရောက်အဆောက်အဦးများထဲကတစ်ခု၌ကျိန်းဝပ်နေကြသည်။ အဆိုပါစတူဒီယိုထဲမှာ LED မီးအလင်းရောင်များအသုံးပြုမှုစက်ရုံရဲ့ Leeds-လက်မှတ်မှလှူဒါန်းခဲ့သည်, ဒါပေမယ့်လည်းကို Creative နည်းပညာများအတွက် 2012-2013 Los Angeles မြို့ဧရိယာသူဟာ Emmy လက်ခံရရှိရက်ဒ်ဝု Media Group သို့အတွက်ကြီးမားတဲ့အစိတ်အပိုင်းကိုမကစားမှသာ ...
သင့်ရဲ့ GoPro Hero3 Proofing ကျည်ဆံ
သင့်ရဲ့ GoPro HERO3 များအတွက်စစ်ရေးတန်းလူမီနီယံပု Redrock ဘော့ကေ့နှင့်ဖွဲ့သောသူတို့သည်မဟုတ်ဘဲအန္တရာယ်များကင်မရာ Set-ups နှင့်သင့် client ကိုတောင်းခံကြောင်းယုံကြည်ချက်ကင်မရာရိုက်ချက်များကျော်လွန်ပြီးကြိုးပမ်းလာသောအခါပြီးပြည့်စုံခြင်းနှင့်အများကြီးလိုအပ်သောဆက်စပ်ပစ္စည်းဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ 1 /4"-20 ချည်ပေါင်းစည်းခြင်းနှင့်လုံးဝကင်မရာ 360 ဒီဂရီဝန်းရံနေကြသည်။ ရုံဒီဇိုင်းကိုကိုယ်နှိုက်က, တုန်ခါ minimize လုပ်များနှင့်စိတ်ငြိမ်ဝပ်ပေးပါသည် ...
ဒစ်ဂျစ်တယ်စနစ်ဖျက်သိမ်း Audio vs analog: အပေါ်ဆွေးနွေးငြင်းခုံဖြစ်စဉ်များ ...
အသံလျှပ်စစ်ထုတ်လွှင့်ထုတ်လွှင့်၏အစောဆုံးလက်ထက် မှစ. ၎င်း၏ဖြစ်ပျက်မှုသေချာစေရန်အသံအင်ဂျင်နီယာရှိခဲ့သည်။ လျှပ်စစ်မီးအချိန်ကို၏အလယ်အလတ်ဖြစ်ဖြစ်ပျက်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တကယ်တော့မူရင်းသံကိုအင်ဂျင်နီယာများကအများတို့သည်လည်းလျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာများဖြစ်ကြသည်။ ဟုတ်ပါတယ်, အကြာတွင်အပေါ်, (မှတ်တမ်းများထုတ်လုပ်သော) ဆေးထိုးအပ်-bearing အသံဖမ်းကိရိယာများကိုထင်ရှားမှတ်တမ်းတင်ပေါ်ကိုအပ်တုန်ခါအဖြစ်အသံ ...
37 ၏စာမျက်နှာ 37«ပထမဦးစွာ...102030«3334353637